यात्राका लागि different बिभिन्न जडानहरू सहित एक Aukey पर्खाल चार्जर म म्याकबाट हुँ
हामी एउटा उत्पादनको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन अउकी फर्मले हामीलाई ती क्षणहरूको लागि प्रस्ताव गर्दछ जब हामी अर्को देश यात्रा गर्नुपर्नेछ र हामी प्रत्येकका लागि बिभिन्न भित्ता एडेप्टरहरू लैजान चाहँदैनौं। यस अवस्थामा, USB चार्जरले हामीलाई connection जडान पोर्टहरू थप्न प्रस्ताव गर्दछ एकै समयमा चार उपकरणहरू र4भित्ता एडेप्टरहरू तिनीहरू संयुक्त राज्य, ब्रिटेन, अष्ट्रेलिया र युरोपको सेवा गर्दछन्।
सामान्यतया, यो भित्ता चार्जर हो जसमा राम्रो यात्रा साथी हुन सद्गुण हुन्छ, किनकि सबै धेरै जसो सबै एडाप्टरहरू चाहिन्छ सबैले यसलाई केवल एउटासँग समाधान गर्दछन्। Aukey, तपाईं केहि बर्ष देखि उपकरण सामान बजार मा भएको छ र यो अझै अर्को हो हामी एक राम्रो मूल्य पाउन सक्छौं र त्यो वास्तवमै रोचक छ यदि हामी धेरै यात्रा गर्छौं.
तथ्य यो हो कि यदि हामी अर्को देशको यात्रा गर्न जाँदैछौं भने पर्खाल जडानहरू वास्तविक समस्या हुन सक्छ र यसका साथ USB चार्जर P पोर्टहरू हामीसँग समस्या हुने छैन। सबै भन्दा राम्रो, यो कुनै पनि आईफोन वा एन्ड्रोइड उपकरण चार्ज गर्न सक्छन् प्रति पोर्ट २.2,4 ए सम्मको साथ, जुन हामीसँग स्मार्टफोन, ट्याब्लेट एकै समयमा चार्ज गर्न सजिलो बनाउँदछ र एक भन्दा बढि प्लग एडाप्टर किन्नु आवश्यक पर्दैन हामी एकसाथ4जना भएकाले हामी भ्रमण गर्ने देशको।
1 बक्सको सामग्री
2 चार्जर विशिष्टता र अपरेशन
हामीले पहिले नै भनेझैं, आफ्नै चार्जर थपिएको छ जुन हामी सजिलैसँग पर्खालका चारवटा सकेटहरू, चारवटा एडेप्टरहरू र प्रयोगका लागि निर्देशनहरू प्रत्येकमा जडान गर्न सक्छौं। यस अवस्थामा, यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्दछ कि यो एक मोडेल होईन जसले द्रुत चार्जलाई समर्थन गर्दछ, तर मलाई लाग्छ कि उनीहरूसँग त्यस्तो छ। जे भए पनि, यसले आधारभूत कार्य गर्दछ जुन हामी चाहन्छौं जुन हाम्रो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट कुनै पनि देशमा चार्ज गर्नको लागि हो।
चार्जर विशिष्टता र अपरेशन
अपरेशन आधारभूत हो र फरक पर्खाल एडेप्टरहरू मध्ये प्रत्येकमा जडान गर्नको लागि यससँग ट्याब छ जुन हामीले गर्न सक्छौं एडेप्टर थिच्नुहोस् र छोड्नुहोस्। यस तरीकाले यो प्रयोग गर्न धेरै सरल छ र माथि सबैको लागि एक अर्काको लागि परिवर्तन गर्न द्रुत।
यस अवस्थामा हामीसँग एक औकी मोडेल PA-U41 चार्जर छ। हालको इनपुट 100-240V-0,5A 50 / 60Hz स्वीकार गर्दछ आउटपुट 5V 4,8A प्रस्ताव गर्दछ (ती प्रत्येक मध्ये अधिकतम २.2,4 ए छ) जसले हामीलाई शान्तपूर्वक चार्ज गर्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, यसको आकार सबैभन्दा ठूलो मध्ये एक होईन र योसँग केही छ 72२ x x 55 x २ mm मिमी एकसाथ 27 85 ग्रामको वजनको साथ। यसको मूल्य हो १..15,99 युरो र हामी यसलाई अमेजनमा फेला पार्न सक्छौं.
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » यात्राको लागि different बिभिन्न कनेक्टरहरूको साथ एक Aukey भित्ता चार्जर